Mashiinka Gawaarida, Gawaarida Stepper, Mashiinka Mashiinka Mashiinka - Newkye
Faahfaahinta mo ...
Lagu dabaqay mashiinka sameynta bacda iyo warshadaha baakadaha kale.
Waxaa lagu dabaqay soosaarida alaabta saxanka, buudhka iyo maqaallada farsamada, iwm.
Lagu dhajiyay mashiinka cnc, sida lathe, milling, shiidi, xarunta mashiinka iwm qalabka xakamaynta nambarada.
Lagu dhajiyay robot alxanka, Raadinta mashiinka, aaladaha lagu xardho, robotka feerka iyo maareynta mashiinka iwm.
Waxaa lagu dhajiyay mashiinka jarista plasma, mashiinka jarjara ololka, goynta laser
Waxaa lagu dabaqay tolida mashiinka daabaca badan ee madaxa badan, Mashiinka Mashiinka Flat, mashiinka feeraha.
Wadamadu waxay si rasmi ah u saxiixeen warshaddii qalabka RCEP taasoo keentay xaalad cusub oo ganacsi
Diisambar / 02/2020
Bishii Nofeembar 15, 2020, war weyn ayaa yimid oo noqday diiradda indhaha ee waddamada adduunka oo dhan. Kadib sideed sano oo wadahadalo ah, hogaamiyaasha 15 dal, oo ay kujiraan Shiinaha, Japan iyo Singapore, waxay ku saxeexeen heshiiska RCEP shir fiidiyoow Waxaa la bartay in RCEP guud ahaan loola jeedo t ...
Isbarbardhiga waxqabadka u dhexeeya mashiinka adeegga iyo mootada stepper
Maaddaama ay tahay nidaam xakameyn furan, mootada stepper waxay xiriir muhiim ah la leedahay tikniyoolajiyad casri ah oo lagu xakameeyo. Nidaamka hadda jira ee kontoroolka dhijitaalka ee gudaha, mootada stepper-ka ayaa si ballaaran loo adeegsadaa. Iyada oo u muuqata muuqaalka nidaamka adeegga buuxa ee 'AC servo', mootada adeegga 'AC servo' ayaa aad iyo aad loogu adeegsadaa digita ...
Miyaad taqaan mootada stepper
Mashiinka Stepper waa qayb ka mid ah xakamaynta furfuran ee wareejinta calaamadaha garaaca wadnaha ee korantada u rogaya barakicin xagal ah ama baro toos ah. Xaaladda aan culeyska badneyn, xawaaraha mootada, booska istaagga oo kaliya waxay kuxirantahay inta jeer ee garaaca garaaca wadnaha iyo lambarka garaaca wadnaha, mana saameynayo isbedelka culeyska, th ...
Gawaarida Stepper Hybrid, Howlsocodsiiyaha gawaarida gawaarida, 220 Volt Ac Howlsocodsiinta Motor, Xidhan Loop Stepper Motor Driver, Stepper Motor Iyadoo Encoder, Mashiinka weyn ee loo yaqaan 'Servo Motor',